War - Sifeeyaha biyaha waxtar ma leeyahay? Maxaa loo hor dhigayaa suufka PP? Xinpaez wuxuu kugu qaadanayaa inaad fahanto miiraha cudbiga pp
Inta badan biyaha lagu nadiifiyo guryaha, qeybta koowaad ee shaandhada waa aaladda miiraha suufka PP. Qaybta miiraha heerka koowaad si toos ah uma taabto oo kaliya tayada biyaha, laakiin sidoo kale waxay saameyn ku yeelataa saameynta soo socota ee seddex-marxaladood ama afarta-marxalad ah iyo nolosha aaladda miiraha, sidaa darteed PP Tayada sheyga miiraha cudbigu wuxuu si gaar ah muhiim ugu yahay Sifeeyaha biyaha.
1. Waa maxay filter-ka suufka PP? Waa maxay faa'iidooyinka?
Qaybta shaandhada cudbiga ee 'PP filter': waa walxo aan sun lahayn oo ur aan polypropylene lahayn, walxo shaandheeye ah oo dhuuban oo ku dhagan kuleylka, dhalaalida, wareejinta, jarista, iyo helitaanka sameynta. Xaqiijinta ugu sarreysa ee sifeynta waxay gaari kartaa 1 Micron. Qaab dhismeedka curiyaha shaandhada waxaa laga sifeeyaa banaanka ilaa heerka gudaha. Markay ugu dhawdahay lakabka gudaha ee shaandhada shaandhada, ayaa yar yar xajmiga daloolada isla markaana uu sareeyo saxnaanta shaandhada. Suufka PP wuxuu leeyahay astaamaha qulqulka ballaaran, caabbinta daxalka, cadaadiska sarreeya iyo qiimaha hooseeya. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo jajabyada waaweyn sida miridhku, qashin, iyo walxaha la joojiyay ee biyaha ku jira.
1. Xasiloonida kiimikada ee suufka PP waa mid aad u wanaagsan. Xasiloonida kiimikada ee suufka PP waa mid aad u wanaagsan. Marka lagu daro inay ku xoqan tahay sulfuric acid isku urursan iyo nitric acid urursan, kama shaqeynayso kiimiko ahaan wakiilo kale oo kiimiko ah. Sidaa darteed, way iska caabin kartaa aashitada, alkaliska, dareeraha dabiiciga ah iyo saliidaha iyagoo aan ka walwalin wasakhdeeda labaad.
2. Khatar uguma jirto wasakhda alaabta kale ee cayriin inta lagu guda jiro isku xidhka udubyada miiraha suufka PP. Isku xidhka udubyada miiraha suufka PP uma baahna adeegsiga agab kale. Waxay kuxirantahay isku xirnaanshihiisa iyo isku xirnaanta midba midka kale si loo sameeyo udub dhexaad u ah qiyaaso kala duwan. Waxaa jira halista sumowga waxyaabaha kale ee ceyriin.
3. Mashiinka suufka PP uma baahna cadaadiska korantada. Inta lagu guda jiro hawsha isku-dhejinta, qaab-dhismeedka laba-geesoodka ah ee laba-geesoodka ah ayaa la sameeyaa, kaas oo leh aag gaar ah oo ballaadhan iyo daciifnimo sare. Tani waxay u oggolaaneysaa shaandhada suufka 'PP' inay ku jirto qaddar badan oo wasakh ah, isla mar ahaantaana u oggolaanaysa in biyuhu si dhakhso leh uga gudbaan iyada oo aan loo baahnayn aalado kor u qaada cadaadiska dheeraadka ah. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in walxaha shaandhada suufka ee 'PP' uusan u baahnayn xoojin awood.
4. 80% nijaasta waa PP suufka qaabdhismeedka lakabyo badan oo kujira miiraha suufka PP, lakab kastaa wuu dhexgalikaraa kuna keydin karaa wasakhda biyaha. Fiilooyinka ku jira lakabka sare way ka sii dhumuc weyn yihiin, fiilooyinka ku jira lakabka gudaha way khafiifsan yihiin, lakabka kore wuu dabacsan yahay, lakabka gudihiisuna wuu adag yahay, wuxuuna sameysmayaa qaab dhismeedka wejiyada badan. Qaab dhismeedkan lakabyo badan, awoodda haynta wasakhda ayaa weynaan doonta, 80% najaqda ay ku sifeeyeen biyaha miiraha waxaa lagu dhammeeyaa shaandhada suufka PP.
4-ta qodob ee kor ku xusan waa faa iidooyinka miiraha suufka PP ee biyaha lagu sifeeyo. Intaa waxaa dheer, waa in la ogaadaa in nolosha adeegga miiraha suufka 'PP' ay caadi ahaan tahay 3-6 bilood, waana in si joogto ah loo beddelaa si loo hubiyo saameynta isdaahirinta biyaha. Qiimaha suufka PP wuu hooseeyaa, waxaana badanaa loo isticmaalaa safka koowaad oo leh ku celcelis heerkiisu sarreeyo si loo gaaro saameynta dhimista kharashyada.
2. Sidee loo aqoonsadaa tayada miiraha cudbiga 'PP filter'?
Tayada miiraha suufka PP waxaa lagu go'aamiyaa cidhiidhiga miiqyadeeda. Fiilooyinka gudaha ee shaandhada suufka ee PP oo tayo sare leh ayaa isku dhagan oo isku mid ah, farqigaasna laguma arki karo isha qaawan waqtiga wax iibsiga. Sideen u kala soocnaa?
Marka hore: fiiri miisaanka. Waxaan ku miisaami karnaa culeyska gacmaheena. Miisaanka culus, ayaa sii weynaanaya cufnaanta fiber-ka walxaha shaandhada iyo tayada oo ka sii wanaagsan.
Ta labaad: fiiri maaddada. Markaad dooranayso shaandhada shaandhada, waa inaad ku rajo weynaataa walxaha shaandhada. Midabka warqadda miiraha ee caadiga ahi waa mid le'eg oo dusha sare ee warqaddu waa siman tahay. Midabka warqadda miiraha ee shaandhada liidata ma ahan isku mid, qaabdhismeedkuna wuu liitaa.
Seddexaad: fiiri compressibility. Guud ahaan, weynaanta cufnaanta fiber-ka ee walxaha shaandhada, ayaa sifiican waxqabadka cadaadiska, iyo tayada wanaagsan ee walxaha shaandhada suufka PP. Waxaan ku xukumi karnaa taabashada. Markuu sii xoogeysto taabashada, ayaa sifiican waxqabadka riixitaanka.
Tan afraad: fiiri kolloid. Cunsurka shaandhada ee caadiga ahi wuxuu leeyahay tayo jel oo wanaagsan iyo dabacsanaan fiican, halka cinjirka shaandhada liita ee jilicsan uu jilicsan yahay oo muuqaalkiisu liito
3. Sidee loo go'aamiyaa haddii miiraha suufka PP uu u baahan yahay in la beddelo? Maxaa habboon in fiiro gaar ah loo yeesho marka la beddelayo suufka PP?
Miiraha suufka cusub ee 'PP filter' waa mid cad. Waad ku kala saari kartaa in tayada biyuhu ay wasakh tahay iyo inay liidato heerka jirka madow ka dib marka cudbiga PP la isticmaalo.
Fiiro gaar ah: Qaybta miiraha waa in la dhaqaa ka dib rakibidda. Waqtiga nadiifinta guud waa inuu ka badnaadaa 5 daqiiqo.
Cunsurka shaandhada suufka PP wuxuu ka tirsan yahay qaybta miiraha miiraha koowaad ee biyo sifaynta. Wasakhda badan ee la sifeeyo, ayaa sida ugu fudud ee sheyga shaandhada loo xirayaa. Sidaa darteed, nolosha curiyaha suufka PP waa mid aad u gaaban. Meesha tayada biyaha liidata waxay u baahan kartaa in lagu beddelo 3 bilood gudahood. Meesha tayada biyaha wanaagsan leh waa inaysan ka badnaan 9 bilood ugu dheer.
Intaas waxaa sii dheer, beddelka sheyga shaandhada waa mid fudud, oo adeegsadayaasha Aspline oo leh awood gacmeed xoog leh ayaa beddeli kara iyadoo la raacayo buugga tilmaamaha, kaas oo lagu rakibi karo bilaa sayid, sidoo kale wuxuu badbaadin karaa wadarta kharashyada.
Waqtiga boostada: Jun-03-2020